Uurka iyo Waalidnimada - Xarunta Caafimaadka ee Lancaster Uurka iyo Waalidnimada - Xarunta Caafimaadka ee Lancaster
CenteringPreg uurka® iyo CenteringParenting®
-QALKA AAN KU JIRIN IN-QOFKA-
Xarunta Caafimaadka ee Lancaster ayaa ku biirtay Xarunta Machadka Daryeelka Caafimaadka in la siiyo macluumaad macno leh iyo waaya-aragnimo bukaannadeenna ah kuwa dhowaan noqon doona waaliddiinta iyo waalidiinta qoysaska sii kordhaya.
Kooxaha Centering® waxay beddelaan booqashooyinka dhaqameed ee mid-ka-foolka ah waxayna bixiyaan qiimeyn, waxbarasho, iyo taageero ay weheliyaan kooxda daryeelka Xarunta Caafimaadka ee Lancaster. CenteringPregnancy® iyo CenteringParenting® waxaa lagu bixiyaa kooxo ahaan barnaamijkeenna Wellness Circle, waxayna hadda hogaamiyaan labada Ingiriis iyo Isbaanish.
Kooxaha 'Centering®' ee Xarunta Caafimaadka Lancaster waxaa lagu qabtaa Qolka Kooxda ee ku yaal waddadayada New Holland Avenue Haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad u baahan tahay macluumaad dheeri ah oo ku saabsan kaqeybgalka barnaamijka, fadlan laxiriir Isuduwaha Fayo-qabka 717-299-6371 ext. 11210.
CenteringPreg uurka® waxay diiradda saareysaa daryeelka dhalmada ka hor. Waxaan ku siineynaa waxbarasho ku saabsan isbedelada jirka inta aad uurka leedahay iyo sidoo kale dhalashada iyo daryeelka cunuggaaga.
Barnaamijkan waxaa lagu dhammeystiraa toban kalfadhi inta aad uurka leedahay oo dhan, kaasoo aad kula kulmi doontid bixiyehaada si shaqsi ah ka dibna aad kula biiri doonto waalidiinta kale ee la kulanka uurka koox koox. Inta lagu gudajiro kulan kasta, xubnaha kooxda waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ka hadlaan walaacyada iyo xalka ku saabsan horumarka uurkaaga, jirkaaga, iyo qoyskaaga.
CenteringParenting® waxay diiradda saareysaa daryeelka caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka, iyadoo la siinayo jawi nasiin iyo jawi deggan si ay ula wadaagaan su'aalaha, talobixinta, iyo waaya aragnimada waalidiinta kale ee kooxda.
Kooxda CenteringParenting® waxay si joogto ah u kulmaan 15 bilood ee ugu horreeya dhalashada ka dib, iyadoo hooyadu si firfircoon uga qayb qaadatay qiimaynta caafimaadka nafsadeeda iyo ilmaheeda. Wadahadallada kooxdu waxay ku dhiirrigeliyaan xubnaha kooxda inay si raaxo leh u aqoonsadaan baahiyaha dhallaankaaga, caafimaadkaaga gaarka ah, iyo qoysaskaaga maadaama kooxdayada daryeelka ay dhameystirayaan qiimeynta caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka.
* CenterPregnancy® iyo CenteringParenting® waa 12-24 bilood oo ah Fayoobaanta Circle inta lagu guda jiro uurka u gudubka 15 bilood ee ugu horreeya nolosha ilmahaaga. Waa lagugu dhiirigelinayaa, laakiin looma baahna inaad kaqeybqaadato labada Wareegood ee Caafimaadka.